फेसबुकमा बोल्डमा लेख्नका लागि उपकरणहरू मोबाइल फोरम
यदि तपाइँ सामाजिक नेटवर्कको नियमित उपयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने, तपाईले आफुलाई सोधेको भन्दा बढी कसरी फेसबुकमा बोल्ड लेख्न। र त्यो पनी पक्का भयो कि यो तपाइँको टेक्स्ट वा सन्देशलाई बाँकी भन्दा माथि उभिनको लागि एक राम्रो प्रणाली हो। त्यो हो, योसँग अधिक दृश्यता र पहुँच छ।
तपाईं स्थिति अपडेटहरूमा बोल्ड पाठ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, भित्ते पोष्टहरूमा, विभिन्न पोष्टहरूमा टिप्पणीहरूमा, फेसबुक च्याट (मेसेन्जर) र तपाईंको प्रयोगकर्ता प्रोफाइलको पाठमा।
जहाँसम्म, तपाईले कत्ति कडा खोज गर्नुभयो, जेसुकै होस्, तपाईले फेसबुक पाठ विकल्प भित्र फेला पार्नुहुने छैन बोल्डमा लेख्ने विकल्प (बोल्ड पाठ अङ्ग्रेजीमा)। यस्तो लाग्छ कि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ कहाँ हेर्ने थाहा छैन, वा यो विकल्प कतै लुकेको छ। आफ्नो टाउको नतोड्नुहोस्: लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्क द्वारा बनाईएको मार्क जुकरबर्ग यस उपकरणलाई पूर्वनिर्धारित रूपमा प्रस्ताव गर्दैन।
फेसबुकमा बोल्ड लेख्ने एक मात्र तरिका बाह्य सेवा प्रयोग गरेर हो. त्यो हो, पाठ ढाँचा कन्भर्टर। यहाँ केहि राम्रा कामहरू छन्।
1 पाठ ढाँचा कन्भर्टरहरू
2 फेसबुक मेसेन्जरमा बोल्ड प्रयोग गर्नुहोस्
3 फेसबुकमा बोल्ड किन प्रयोग गर्नुहुन्छ?
पाठ ढाँचा कन्भर्टरहरू
पाठ ढाँचा कन्भर्टरहरू आज प्राय: मात्र प्रणाली हामीसँग फर्म्याट गरिएको पाठ घुसाउनको लागि छ। न केवल बोल्ड, तर इटालिक र अन्य पनि। उनीहरूले हामीलाई फेसबुकका लागि, तर इन्स्टाग्राम, टिकटोक, ट्विटर र अन्य सामाजिक नेटवर्कहरूको लागि पनि सेवा पुर्‍याउँछन्। यो सत्य पनि छ कि यसको पढ्न योग्यताको गुण उपकरणमा निर्भर हुन सक्छ। उदाहरणका लागि केहि शैलीहरू आईफोन, आईप्याड वा आइपड टचमा दृश्यात्मक हुँदैन।
Yay Text को सहयोगमा फेसबुकमा बोल्डमा कसरी लेख्ने
यो व्यावहारिक उपकरणले हामीलाई यूनिकोड प्रतीकहरूमा आधारित छनौट गर्न विभिन्न पाठ शैलीहरू प्रदान गर्दछ। यो उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक हो जब यो फेसबुकमा बोल्डमा कसरी लेख्ने भन्ने प्रश्नको उत्तरको लागि आउँदछ। यो प्राप्त गर्न, हामी निम्न चरणहरू अनुसरण गर्नेछौं:
हामी पहुँच गर्नेछौं यो लिङ्क को वेबसाइट भित्र YayText.
बक्समा देखा पर्नेछ (जहाँ यसले "तपाईंको पाठ" भन्छ) हामी टिप्पणी वा प्रकाशनको पाठ प्रविष्ट गर्दछौं जुन हामी फेसबुकमा लेख्न चाहन्छौं।
पाठ बाकस मुनिको सबै उपलब्ध प्रकार्यहरू र विकल्पहरू देखा पर्नेछन्। ती मध्ये, हामी बक्सको पाठमा लागू गर्नको लागि «bold to (त्यहाँ प्राय: धेरै धेरै) लाई पनी एक छनौट गर्नेछौं।
त्यसो भए तपाईले "प्रतिलिपि" बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ तपाईको सबैभन्दा मनपर्ने उदाहरणको पछाडि। त्यसो गरेर, यो क्लिपबोर्डमा बचत हुनेछ, फेसबुकमा "टाँस्न" को लागी तयार।
Fsymbols: फेसबुकमा अधिक र अधिकको लागि बोल्ड पाठहरू लेख्न
यो दोस्रो उपकरण YayText भन्दा पनि राम्रो छ, किनकि यसले धेरै कार्यहरू प्रदान गर्दछ। निस्सन्देह, यसले फेसबुकमा बोल्डमा कसरी लेख्ने भन्ने प्रश्नको समाधान गर्दछ, तर हामी यसलाई प्रयोग गर्ने पाठहरूसँग सम्बन्धित अन्य थुप्रै समाधानहरू पनि भेट्टाउनेछौं।
सामान्यतया, को साथ को साथ Fsymbols हामी हाम्रा सबै पाठहरूलाई रूपान्तरण गर्न सक्दछौं र जटिल पेशेवर वा शैक्षिक लेखनहरू, व्यावसायिक पाठहरू वा साधारण मजाका सन्देशहरू बनाउन सक्छौं, हाम्रो आवश्यकता अनुसार। यस उपकरणले तपाइँलाई प्रतीकहरू र संकेतहरू, रेखांकितहरू, स्ट्राइकथ्रुहरू, इटालिकहरू ... र बोल्ड, पक्कै पनि प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। हामी यसलाई चरण-चरण कसरी प्रयोग गर्ने भनेर वर्णन गर्दछौं।
सबै भन्दा पहिले, हामी को वेबसाइट मा प्रवेश Fsymbols.
त्यहाँ एक पटक हामी ट्याबमा क्लिक गर्दछौं "जेनरेटर" र, नयाँ स्क्रिन जुन खुल्छ, चयन गर्नुहोस् "बोल्ड" (बोल्ड फन्ट)।
पाठ बाकसमा हामी लेख्न टाँस्छौं जुन हामी रूपान्तरण गर्न चाहन्छौं र बोल्डको प्रकार छनौट गर्नुहोस् जुन हामी लागू गर्न चाहन्छौं।
अन्तमा, जब हामीसँग पाठ तयार हुन्छ, हामी यसको प्रतिलिपि बनाउँदछौं (प्याशनका साथ) "कापी")। बोल्ड पाठ हाम्रो क्लिपबोर्डमा बचत हुनेछ पछि फेसबुकमा टाँस्न।
फेसबुक मेसेन्जरमा बोल्ड प्रयोग गर्नुहोस्
फेसबुक मेसेन्जरमा बोल्ड ग्रन्थहरू लेख्नुहोस्
तपाईलाई पहिल्यै थाहा छ, फेसबुकसँग आफ्नै इन्स्ट्यान्ट मेसेजिंग फंक्शन पनि छ, लोकप्रिय फेसबुक मैसेन्जर। यस च्याटको लागि धन्यबाद, सामाजिक नेटवर्क को उपयोगकर्ता आफ्नो साथीहरु को सूची मा मानिसहरु संग कुराकानी गर्न सक्छन्।
यस च्याटमा HTML ट्यागहरू प्रयोग गर्न सम्भव छैन पाठ ईटालिक वा बोल्ड अनलाइन बनाउन, तर त्यहाँ केही तरिकाहरू छन्। ती मध्ये एक हो तारांकन प्रतीकको प्रयोग (*) प्रत्येक शब्दको अघि र पछी यो बोल्डमा देखिन्छ। तपाईं यो कसरी गर्नुहुन्छ? धेरै सजीलो:
सबैभन्दा पहिले, हामी हाम्रो ईमेल र पासवर्डको साथ हाम्रो फेसबुक खाता प्रविष्ट गर्नेछौं। एक पटक भित्र भित्र, हामी हाम्रो एक साथीसँग च्याट सत्र शुरू गर्नेछौं।
त्यसो भए हामी पहिलो अक्षर भन्दा पहिले र अन्तिम पछि एस्टरिस्क (*) को प्रयोग गरेर प्रश्नमा शब्द वा सन्देश लेख्नेछौं।
अन्तमा, हामी «पठाउनुहोस् on मा क्लिक गर्नेछौं र दुई तारा चिन्हहरू बीचमा बन्द गरिएको पाठ बोल्डमा देखा पर्नेछ। माथिको छविलाई उदाहरणको रूपमा प्रयोग गर्दै, तारांकन ("सबमिट" थिचे पछि अदृश्य) शब्दहरू "बोल्ड" (बीचमा * * बिचको बीचमा) अवस्थित हुन्छन्।
यो ध्यान दिनुहोस् कि यो साधारण चाल फेसबुक मेसेन्जरमा लेख्दा मात्र मान्य हुन्छ। अर्कोतर्फ, हामी पर्खालका प्रकाशनहरूमा वा टिप्पणीहरूमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछैनौं। यसको लागि हामीले अघिल्लो सेक्सनमा छलफल गरिएको पाठ ढाँचा रूपान्तरणहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
फेसबुकमा बोल्ड किन प्रयोग गर्नुहुन्छ?
जब हामी फेसबुकमा बोल्डमा कसरी लेख्ने भनेर विचार गर्छौं (र उही इटलिकहरूको लागि जान्छ) चीजहरू एक साधारण सौन्दर्य प्रश्न भन्दा धेरै अगाडि जान्छ। त्यहाँ त्यसो गर्न धेरै कारणहरू छन्। अर्को, र एक निष्कर्षको रूपमा, हामी तीन मुख्य व्यक्तिको सारांश दिन्छौं:
हाम्रो श्रोताको ध्यान लिनुहोस्। सामाजिक नेटवर्कहरूमा, चाहे हामी त्यसलाई व्यावसायिक वा कार्य उद्देश्यका लागि वा व्यक्तिगत उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने हो, यो महत्त्वपूर्ण छ कि बाहिर उभिन र आफैंलाई भिन्न गर्न। बोल्डमा लेखिएको उही सन्देश स्पष्ट रूपमा ठूलो प्रभाव प्राप्त गर्दछ।
हाईलाइट गर्नुहोस् वा एक विशिष्ट राय वा टिप्पणीमा जोड दिनुहोस्। यस अर्थमा, बोल्डको प्रयोग कार्य गर्नुपर्दछ र केहि सन्देशहरू हाइलाइट गर्नको लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ। यो संसाधन दुरुपयोग गर्न उचित छैन।
खोज इञ्जिन श्रेणीकरण सुधार गर्नुहोस्। यो सत्य हो कि, एसईओ रणनीति भित्र, बोल्डको प्रयोग ब्लगहरू र वेब पृष्ठहरूको पाठमा अधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर सामाजिक सञ्जालमा यसको महत्त्वलाई कम महत्त्व दिइनु हुँदैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » सामाजिक सञ्जालहरू » फेसबुकमा बोल्ड लेख्नका लागि उपकरणहरू
शीर्ष free नि: शुल्क ड्रपबक्स विकल्पहरू